Kufananidza kwegore rekuchengetedza masevhisi | IPhone nhau
Mushure mekuziviswa kwezuro neMicrosoft, mairi nzvimbo yekuchengetera yaive shoma uye yakaderedzwa kune vese vashandisiVazhinji vavo, kusanganisira avo vane Hofisi 365 kunyoreswa, vatanga kutsvaga dzimwe nzira. Asi zvinoita sekunge zvese hazvina kurasikirwa sezvo vashandisi vakati wandei vasina kufara neiyi sarudzo yekudyidzana neMicrosoft, vakavhura papuratifomu Change.org chikumbiro chevakomana vanobva kuRedmond kuti vafungisise nezve sarudzo iyi, kuti nevashandisi vashoma vamwe vese vashandisi vakakuvadzwa.
Kana zvese zvikaramba zvichiziviswa naMicrosoft, kubva muna Ndira, vese vashandisi vane mahara 15 GB account vanozoona kuti yakaderedzwa sei kusvika kungove 5. Kunyange vashandisi vane chibvumirano Office 365, vachabva pakuva nenzvimbo isingagumi yekuchengetedza kuva 1 TB chete. Vashandisi vane nzvimbo isina muganho vakazvipira kuti vaise zvese kune iro gore, uye mune dzimwe nguva ivo vakakwanisa kushandisa kusvika 75 TB yeruzivo. Izvo hazvina kufadza Microsoft uye ndokururamisa sarudzo yayo mune izvo zviitiko.
2GB - - vakasununguka - - - -
5GB vakasununguka - - vakasununguka - vakasununguka -
10GB - - - - vakasununguka - -
15GB - vakasununguka - - - - -
20GB - - - - - € 8 / gore -
50GB € 0.99 / mwedzi - - € 1.99 / mwedzi - € 20 / gore vakasununguka
100GB € 1.99 / mwedzi - - - € 10 / mwedzi € 40 / gore -
200GB € 2.99 / mwedzi - - - - € 80 / gore € 9.99 / mwedzi
500GB - - - - - € 200 / gore € 9.99 / mwedzi
1TB € 9.99 / mwedzi € 9.99 / mwedzi € 9.99 / mwedzi € 6.99 / mwedzi ** - € 400 / gore -
2TB - - - - - - € 19.99 / mwedzi
4TB - - - - - - € 29.99 / mwedzi
10TB - € 99.99 / mwedzi - - - - -
20TB - € 199.99 / mwedzi - - - - -
30TB - € 299.00 / mwedzi - - - - -
Unlimited - - - - - - -
* Kubva muna Ndira 2016
** Inosanganisira kunyorera kuOfisi 365
Parizvino vese vanopa gore rekuchengetedza vabvisa sarudzo isingagumi kuchengeta chero rudzi rwefaira. Google ndiyo yega inotibvumidza kuti tigadzire edu ese mapikicha mugore pasina muganho wenzvimbo, chinodiwa chete ndechekuti tidarike resolution uye mhando yemavhidhiyo, ayo atinogonawo kuchengeta, akaenzana kana akakura kudarika 4k.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » ICloud » Kufananidza kwegore rekuchengetedza masevhisi
Mu amazon ini ndinofunga kuti iyo isina muganho nzvimbo iri € 60 pagore, kwete pamwedzi sekutaura kunoita posvo. 60 € XNUMX pamwedzi zvinotyisa.
Ini ndanga ndakanganwa kutaura kuti mitengo yemamwe masevhisi akadai seGoogle Drive haina kunaka. Kwe € 300 pamwedzi yaunoti zvinodhura, vanogona kukupa iyo iPhone gore rega rega 😉
Ndine urombo, ndinogadzirisa zviri pamusoro, CHETE mutengo weAmazon hauna kunaka. Google Drive iri € 300 / mwedzi kunyangwe ichiita senge inodhura
Kukanganisa mu30tb kunoisa 30gb.
Ndatenda, vanowedzera. Yakagadziridzwa iyo kukanganisa.
Mangwanani akanaka, Amazon haipe risingaperi huwandu hwakawanda hwe1TB 400 maEuro pagore, chinhu ichi canvia uye yakawanda ……
Kutenda Coper, Yakagadziridzwa mitengo.
Amazon inopa risingagumi ye60 usd pagore: https://www.amazon.com/clouddrive/
Google Drive haina muganho chete yevadzidzi nevadzidzisi kuburikidza neGoogle Apps yeDzidzo system
Mariano, ndiudze sei kuti ndiwane iyo isina muganho kuenda ku59,99 euros, kana ini ndichiwedzera chirongwa changu ini handiwane chero muganho, ndinovimba
richard sandoval akadaro
Ndanga ndichishandisa risingaperi amazonm gore sevhisi, ini ndichiri mumwedzi mitatu yemuyedzo yemahara, asi ndinofunga kuti ndinogara pano, hapachina, ndiyo yakanakisa, iri madhora makumi matanhatu munyika yangu, iyo iPhone app inoshanda zvakanyanya tsime.
Pindura richard sandoval
Ndanga ndichishandisa Dataprius kwemakore. Izvo hazvizivikanwe senge zvakapfuura, asi imhaka yekuti iri yakawanda kumakambani, pane kune vanhu, kunyangwe iine mitengo yakanaka. Iyo ine yemahara vhezheni ye2 magig.
Ichi ndicho chikonzero Siri yeApple TV inogumira kune nyika sere